Sajhasabal.com | Homeलकडाउनमा घरमै खुसी र स्वस्थ रहन शारीरिक अभ्यास
डा. हुल्सा पौडेल | कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयमा घरमै बसेर शारीरिक रूपमा सक्रिय जीवनशैली अपनाउनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । सक्रिय जीवनशैली नअपनाउँदा विभिन्न किसिमका रोगको शिकार हुनु पर्ने अबस्था आउँछ । यस्तो बेला आफूलाई स्वस्थ राख्न के गर्ने ?
कोरोना भाइरसकोे महामारीका बीचमा खुसी र स्वस्थ रहन बलियो प्रशिक्षण वा प्रतिरोध तालिम कुनै पनि फिटनेस रुटिनको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । बलियो प्रशिक्षण तौल बिना, मेसिन बिना, पनि गर्न सकिन्छ ।
के मैले महामारी मा पनि व्यायाम गर्न सक्छु ?
म क्वारेन्टाइन भित्र छु, तर संक्रमित छैन । के मैले शारीरिक गतिविधि सीमित गर्नु पर्दछ ?
म संक्रमित भएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छु । के मैले शारीरिक गतिविधि सीमित गर्नु पर्दछ ?
यस्तो बेला हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्न के गर्न सक्छौं ?
प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय रहँदा सामाजिक रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेकले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु पर्छ ।
ती भूमिकाहरु हुन्ः
- लेखिका फिजियोथेरेपिस्ट हुन् ।